Nagu saabsan - Zhejiang Tonva caag mashiinka CO., LTD
Mashiinka balaastikada Zhejiang Tonva CO., LTD
TONVA (AZ turnkey qeybiyaha, 1993), oo ay hagayaan ISO9001: 2008 Nidaamka Xakamaynta Tayada Caalamiga ah iyo shahaadada CE & SGS, waxay had iyo jeer ku jirtay wadada soo saarida alaabooyin heer sare ah oo casri ah iyo tikniyoolajiyad cusub. Hawlaheena ganacsiga waxay daboolayaan soo saarista Mashiinka Mindhicirka Afuufa, Mashiinka wax lagu nadiifiyo ee Afuufa iyo Caaryado. Waxaan awoodnaa inaan u dhoofinno ku dhowaad 400 nooc oo mashiin ah sanad kasta in ka badan 100 dal, sida Bangladesh, India, Pakistan, South Africa, Argentina, Malaysia, UAE, USA iyo wixii la mid ah.
Mashiinkayaga wax lagu dubo ee dharbaaxo-duubista ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alaabada maalin kasta la isticmaalo, dhalada biyaha isboortiga, dhalada sunta cayayaanka, dhalada daawada, dhalada la isku qurxiyo, weelka wax lagu duubo ee cuntada, qeybaha alaabta guriga, qeybaha gawaarida, qalabka isboortiga, jiiriyada iyo caagag kale oo yar yar ama dhexdhexaad ah alaabta.
Taageerada joogtada ah ee joogtada ahi waa aaladdayada adeegga ugu fiican. Marxalad kasta oo ka mid ah mashruucaaga, waxaan halkan u joognaa inaan ku siino talo farsamo. Ku qanacsanaantaada khibrada wax iibsiga ayaa noo ah qirasho weyn. Waxaan sidoo kale naga go'an inaan fulino wax soo saarkaaga waxsoosaarka sida ugu macquulsan iyada oo ujeedadu tahay iskaashi lagu guuleysto.
In ka badan 30 sano oo khibrad wax soo saar xirfadeed ah, waxay ku siinayaan mashiinno iyo qalab tayo sare leh.
U habee mashiinnada aan caadiga ahayn iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha isla markaana kuu soo saar qalabka kula tartamaya.
Aqoonsiga Warshadaha 4.0 isla markaana dhiirrigeli "Isdhexgalka aadanaha iyo kombuyuutarka"
Adeeg tixgelin leh
Kooxda adeegga iibka kadib marwalba khadka tooska ah si ay kuugu siiyaan adeeg tayo leh.
Bixi taageero ka dib iibinta mashiinkaaga wax soo saar oo kula horumari adiga.
Adoo diirada saaraya tayada mashiinka in kabadan 30years, ayaa kuu keenaya nolosha waqtiga dheer ee mashiinka. Si joogto ah ikhtiraac oo horumar, u siiso qalab mashiinka si kafiican, waxtar badan oo dhaqso badan suuqa.
Tikniyoolajiyadda aasaasiga ah ee mashiinka Dhinta madaxa iyo u dhaqaaqista xiritaanka nashqadda madaxbannaan ayaa ah faa'iidadeena gaarka ah ee warshadaha wax taaj oo kale dharbaaxo.
Hal-abuurnimadu waa awoodda wax soo saar aasaasiga ah iyo isha ay ka hesho firfircoonida shirkaddu.
Maaddaama ay tahay shirkad xiddig ku takhasustay soo saarista mashiinnada wax lagu nadiifiyo dharbaaxo,> 7 \_ OW \_ waxay had iyo jeer dhigtaa cilmi-baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda meesha ugu horreysa. Shirkaddu waxay leedahay qol cilmi baaris iyo horumarin madaxbanaan, waxayna ku qalabeysan tahay koox xirfadlayaal ah R & D, oo ay ku jiraan injineero wax taaj oo kale ah oo dharbaaxo leh, injineerada naqshadeynta caaryada oo dharbaaxo leh, farsamo yaqaanno wax ku duubaya, iwm. si joogto ah isku day xal cusub, oo aad ku siineyso suuqa mashiinka wax lagu duubo oo leh dhamaadka sare, qalab wax ku ool ah oo xawaare sare leh.
Hal-abuurnimadu waxay u horseedaysaa YAOVA inay horay u socoto.
Shirkaduhu waxay raacaan "tayada badbaadada, hal-abuurnimada iyo horumarka, u janjeedha suuqa, adeegga u janjeedha" falsafadda ganacsiga, asalka isticmaalaha oo dhan, noocyada kala duwan, heerarka kala duwan, wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo asxaabta ka socota dhammaan qaybaha nolosha si loo abuuro
Nala soo xiriir si aad u hesho Macluumaad Dheeraad ah